Asturias ရှိ La Playa del Silencio | ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | Espana, ကမ်းခြေ
တိတ်ဆိတ်သဲသောင်ပြင်။ နာမည်ကောင်း! ဒီတော့ကဗျာဆန်ဆန်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့သူ၊ သူမနဲ့တွေ့ဆုံချင်တာကိုမင်းကူညီနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လား? ၎င်းသည်စပိန်၌ရှိပြီးလှပသောကမ်းခြေများစွာအနက်တစ်ခုဖြစ်သည် Asturias ၌တည်ရှိ၏ ထိုသို့လည်း၏အမည်အားဖြင့်လူသိများသည် Playa d'El Gavieiru ။
ကမ်းခြေသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရှုခင်း၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောတစ်ချိန်က၎င်းသည်လူသိနည်းသောကြောင့်လူတစ် ဦး သည်နေ ၀ င ်၍ ဘုရားသခင့်ကမ္ဘာသို့ယူဆောင်လာသည့်အခါနှစ်ခြင်းခံနိုင်သည်။ ဟုတ်တယ်၊ ဒါကဝတ်လစ်စလစ်ကမ်းခြေဖြစ်ခဲ့သည် သို့သော်ယနေ့တွင်၎င်းကိုနှစ်သက်သူအရေအတွက်နှင့်အတူလွတ်လပ်မှုများစွာနှင့်လမ်းလျှောက်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ကျနော်တို့ကမ်းခြေအထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ၎င်းသည်Castañerasမြို့ရှိ Asturias တွင်ဖြစ်သည်၎င်းကိုနေထိုင်သောငှက်မျိုးစိတ်များဖြင့်ကာကွယ်သောareaရိယာ၌။ ၎င်းသည်ပျော့ပျောင်း။ ပျော့ပျောင်းသောသဲများရှိသည့်ကမ်းခြေမဟုတ်ဘဲကုန်းတွင်းပိုင်းဖြစ်သည် ကျောက်ခဲနှင့်ပြည့်ဝ၏ကမ်းခြေပတ်ပတ်လည်ရှိအမှန်တကယ်တစ်မီးကျောက် ၄.၈၉ မီတာအရှည်ရှိသည်။ Avilésနှင့်ကီလိုမီတာ ၃၀ အကွာ၊ Cudillero မှ ၁၂ နှင့် Luarca မှ ၂၁
ပထဝီပညာရှင်များအတွက် Asturian Asturian ကမ်းခြေ၏ဤအပိုင်းကိုaဟုသတ်မှတ်သည် ပညာရေးဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွား၏ geomorphological site ကို ၎င်း၏လေ့လာမှုကကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းရိုးတန်းနှင့်ကမ်းရိုးတန်း၏ဖွဲ့စည်းမှုတွင်ပါ ၀ င်သောလုပ်ငန်းစဉ်များကိုနားလည်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ၎င်း၏ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးပြည်နယ်သည်အလွန်ကောင်းလှ၏ကြောင့်ဖြစ်သည် ကမ်းပါးများကဝိုင်းရံထားသည် y ကားဝင်ပေါက်မရှိဘူးဒါကြောင့်သင်ကလမ်းထဲကနေထွက်ပြီးအနီးကပ်လမ်းလျှောက်ရတယ်။
ဒီကမ်းခြေကို ၎င်းကို Gavieiru အမည်ဖြင့်လည်းလူသိများသည် သူတို့ပြောသည့်အတိုင်း၎င်းသည်ပင်လယ်စာသို့မဟုတ်စကားလုံးမှဆင်းသက်လာသည် ကျောက်တုံးဒေသခံတုတ်၏ထုပ်များနှင့်ဒိုင်းခွေများကိုရည်ညွှန်းသည့်အမည်။ ပုံရသည် တိတ်ဆိတ်သဲသောင်ပြင် ၎င်းသည်မုန်တိုင်းများမှမိမိတို့ကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်ခိုလှုံရာအဖြစ်တည်ရှိခဲ့သောရေအေးအေးချမ်းချမ်းအတွက်တံငါသည်များကရွေးချယ်လိုက်သောနာမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါတို့ဆယ်စုနှစ်နှင့်တစ်နှစ်ခွဲကြာအောင်မဝေးတော့သည့်အချိန်တွင်၎င်းသည်အထီးကျန်ခြင်းကြောင့်တိကျသောအဝတ်အချည်းစည်းကမ်းခြေတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုခဲ့သည်။ သို့သော်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကရှာဖွေတွေ့ရှိကတည်းကကမ်းခြေကိုသွားလာမှုတိုးတက်လာခြင်းသို့မဟုတ်စီးရီးလမ်းကြောင်းများပေါ်ရောက်ခြင်းတို့ကြောင့်ထိုအရာသည်မဖြစ်နိုင်ပါ။ Fame သည်ပြofနာအနည်းငယ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးအမှိုက်သရိုက်ဖြစ်သွားစေသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သဘာဝကိုခံစားနိုင်သော်လည်းအမှိုက်သရိုက်များကိုအိမ်သို့အမြဲတမ်းသယ်ဆောင်သွားရသည်။
Playa del Silencio ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ။ သင်သည် Cantabria နှင့် Cudillero မှဖြစ်စေ၊ တောင်ဘက်ဖြစ်စေ၊ Galicia မှဖြစ်စေကားဖြင့်ရောက်ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ Cantabrian အဝေးပြေးလမ်း နှင့်Castañerasရ။ Cudillero မြို့၏အနောက်ဘက် ၁၆ ကီလိုမီတာအကွာတွင်ရှိသည်။ ကားကသင့်ကိုသဲသောင်ပြင်ထဲမှာမဟုတ်ဘဲခြေထောက်နားမှာချန်ထားခဲ့လို့ကမ်းခြေကိုဆင်းတဲ့လှေကားထိပ်၊ ချောက်ကမ်းပါးထိပ်မှာချန်ထားခဲ့တယ်။ မြင်ကွင်းကဒီနေရာကနေလှပနေတယ်။ တောင်စောင်းကမတ်စောက်တဲ့အတွက်ဆင်းသက်မှုကနည်းနည်းကြောက်စရာကောင်းတယ်။
မြို့နှင့်ကမ်းခြေအကြားလမ်းကြောင်းကိုမစိုးရိမ်ပါနှင့်၊ နိမိတ်လက္ခဏာများရှိသည်။ သငျသညျအမြင့်ဆုံးရာသီ၌သွားရသို့မဟုတ်နေ့ကလှပသောလျှင်နှင့်ကမ်းခြေပေါ်မှာလူပြီးသားရှိကွောငျးကိုကွောကျရှံ့ မြို့ထဲမှာကားသွားပြီးလမ်းလျှောက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ အမှိုက်ပုံမှာ ၁၀ မိနစ်ထက်မပိုစေရ။ ကမ်းခြေသည်မီတာ ၅၀၀ ခန့်ရှည်လျားပြီးကျယ်ဝန်းလွန်းသည်။ သဲသောင်ပြင်သည်ကျောက်စရစ်ခဲသဲသောင်ပြင်ဖြစ်သောကြောင့်လှိမ့်သူများကိုသယ်ဆောင်ရန်မှာမကောင်းသောအကြံမဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့မင်းကအရာအားလုံးကိုသယ်ဆောင်ရမယ် ကစနစ်တကျကမ်းခြေမဟုတ်ပါဘူး- အိမ်သာမရှိ၊ ကမ်းခြေအရက်ဆိုင်များမရှိ၊ ထီးများနှင့်နေရောင်ခြည်များငှားရမ်းရန်နေရာမရှိပါ။
Playa del Silencio သည်မြင်းခွာနှင့်ပုံသဏ္isာန်တူသည်, ပတ်ပတ်လည်ကမ်းပါးဒေါင်လိုက်, အရပ်ရှည်ရှည်, မီးခိုးရောင်နှင့်အက်, ထင်းရှူးပင်များနှင့်ချုံ၌ဝတ်။ နေ့၏အချိန်အရရေမျက်နှာပြင်သည်ကွဲပြားခြားနားပြီးနေ၏ကွဲပြားမှုသည်တောက်ပမှုနှင့်တန်ချိန်များကိုကွဲပြားစေသည်။ တခါတရံတွင်အပြာနက်၊ အလှအပ နှင့်ပွင့်လင်းဒါရပ်တန့် ရေကူးခြင်းနှင့်ရေငုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရေကူးခြင်း အဲဒါပြီးပြည့်စုံတယ် ကြည့်ဖို့ဘာရှိလဲ အခြားသူများအကြားဗလီ, barnacles, maragotas, conger ငါးရှဥ့်, bream, ပင်လယ်ဘေ့စနှင့် merlos ။
ဤအရောင်များနှင့်ကမ်းခြေ၏စစ်မှန်သောပုံသဏ္trueာန်ကိုစဉ်းစားရန်အကောင်းဆုံးအချက်မှာအထက်မှဖြစ်သည်ဟုပြောရမည်။ The သတိထားပါ အပေါ်ဆုံးသည်ကမ်းခြေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိကျောက်ဆောင်များနှင့်ကျွန်းငယ်များအပြင်ဆင်းသက်လာသည့်ချောက်ကမ်းပါးများကိုဖော်ပြထားသောရွေ့လျားနေသောလှေကားထစ်များကိုအကောင်းဆုံးမြင်နိုင်သောတစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်ယာဘက်တွင်စိမ်းလန်းသောလယ်ကွင်းများနှင့်ပင်လယ်ကြားရှိလှပသောပေါင်းစပ်ထားသောကျောက်တုံးကြီး La Caladoria ကိုလည်းတွေ့နိုင်သည်။
ဒီရေမြင့်တက်နေပါကကမ်းခြေပျောက်ကွယ်သွားပြီးဒီရေနည်းသွားသည့်အခါအယ်လ်ရီဂို (အနောက်ဘက်ရှိ Sama ကျွန်းနှင့် Punta Gayuelos) အကြားရှိအရှေ့ဘက်သို့သဲသောင်ပြင်လေးတစ်ခုတွေ့ရသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကားဖြင့်ရောက်ရှိနေလျှင် Asturias သည်လည်ပတ်ရန်လှပသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည် လမ်းခရီးစဉ်။ Playa del Silencio တွင်ရောက်နေလျှင်သင်သည်ပင်လယ်ကမ်းခြေတစ်လျှောက်ဆက်သွားနိုင်ပြီး Cabo Vidio ကိုမီးပြတိုက်၊ Playa de Gueirúa, Garita de Punta Borona နှင့် Novellana နှင့်အတူသွားရောက်နိုင်သည်။ ဤရွေ့ကား ဦး တည်ရာများနီးကပ်သည်နှင့်သင်သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်ဖို့သေချာပါသည်။ သင့်အိမ်တွင်ကျေးလက်နေအိမ်များအများအပြားရှိနေသဖြင့်သင်အိပ်ရန်သို့မဟုတ်စားရန်တည်းခိုနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » ကမ်းခြေ » Asturias ရှိ Silencio ကမ်းခြေ